कलाकारले भित्ता सुन्दर बनाएझैं नेताले देश सुन्दर बनाइदिए! :: राजेश घिमिरे :: Setopati
कलाकारले भित्ता सुन्दर बनाएझैं नेताले देश सुन्दर बनाइदिए!
चितवन, मंसिर १०
एमालेको दसौं महाधिवेशन क्रममा चितवनका कलाकारहरू सौराहाका सडक भित्तामा चित्र बनाउँदै। तस्बिर: राजेश घिमिरे/सेतोपाटी
सौराहाको मुख्य सडकबाट भित्र छिर्ने एउटा साँघुरो बाटो, दुईतर्फ लेउ लागेका पर्खाल। केही युवा रंग लगाएर ती पर्खालमा सौन्दर्य भर्दै गरेका भेटिए।
लहरै उभिएका उनीहरू कोही प्राकृतिक सम्पदा, कोही वन्यजन्तु त कोही देशमा भएका भौतिक संरचनाका चित्र कोर्दै थिए। यी सबै विषयसँग नेपालीको सम्बन्धलाई उनीहरू भित्तामा उतार्दै थिए।
सबैको उद्देश्य थियो, चित्रकलामार्फत 'समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली' को अर्थ देखाउने।
नेकपा एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र हुने तय भएको होटल सेभेन स्टारसँग जोडिएको सडक पर्खालमा प्रगतिशील ललितकला संघले प्रतियोगितात्मक चित्रकला कार्यशाला गरेको थियो। दुई दिनसम्म चलेको कार्यशालामा ५७ जना चित्रकार सहभागी भएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष लालकाजी लामाले बताए। तिनै चित्रकारहरूको टोली सौराहाका सडक पर्खाल र भित्तामा आफ्नो सिर्जना पोख्न तल्लीन छन्।
लामाका अनुसार कार्यशालामा सहभागी सबै चित्रकार चितवनकै हुन्। कक्षा ८ मा पढ्दै गरेका बालबालिकादेखि ४० वर्षसम्मका चित्रकार प्रतियोगितामा सहभागी थिए। उनीहरूले एकल र सामूहिक चित्र बनाएका थिए।
'हाम्रो उद्देश्य समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई भित्तामा उतार्नु मात्रै थिएन, फोहोर ठाउँलाई पनि कलाकारले चाह्यो भने कति सुन्दर बनाउन सक्छन् भन्ने देखाउनु पनि थियो,' लामाले भने, 'नेताले चाहे देश पनि यस्तै सुन्दर बन्न सक्छ। कलाकारले फोहोर भित्ता सुन्दर बनाएझैं नेताले देश सुन्दर बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने सन्देश दिन पनि खोजिएको हो।'
यसबाहेक महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्य पनि रहेको उनले बताए।
'उम्मेद्ववारले त भोट माग्दैमा फुर्सत नपाउलान् तर प्रतिनिधिहरू भोट हालेपछि खाली हुन्छन्। उनीहरूले यी भित्तेचित्र हेरेर मनोरञ्जन लिऊन् भन्ने उद्देश्य पनि हो,' लामाले भने, 'चितवनका कलाकारले बनाएका कारण चितवनका पहिचान झल्कने चित्रहरू धेरै बनेका छन्। यसले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि सघाउनेछ।'
महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने नेता तथा प्रतिनिधिहरूले अवलोकन गरेपछि उनीहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा उत्कृष्ट चित्रकार छनोट गरिने उनले बताए।
बन्दसत्र स्थलमा देशभरका चित्रकारहरूले बनाएका सयवटा चित्र पनि प्रदर्शनमा राखिने अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए।
'संघमा आबद्ध चित्रकारहरूले आफूले बनाएका उत्कृष्ट चित्र लिएर आउनुभएको छ। ती चित्र साँस्कृतिक समितिको स्टलमा प्रदर्शन गरिनेछन्,' उनले भने, 'यो महाधिवेशन राजनीतिक थलो मात्रै नभएर कलाकारका लागि पनि विशेष छ भनेर देखाउन खोज्दैछौं।'
नेकपा एमालेले महाधिवेशनको उद्घाटनस्थल नारायणी नदी किनारमा पार्टीको झन्डा बोकेको गैंडाको मूर्ति तयार पारेको छ। स्थायी रूपमा तयार पारिएको मूर्तिमा महाधिवेशनपछि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राखिने महाधिवेशनको मञ्च व्यवस्थापन समितिका संयोजक विनोद श्रेष्ठले बताए।
उद्घाटनस्थलमै मजदूरले विश्वको नक्सा बोकेको मूर्ति पनि राखिँदैछ। यो मूर्ति पनि स्थायी रूपमै रहनेगरी तयार पारिएको छ। उद्घाटनस्थलमा करिब एक दर्जन 'सेल्फी प्वाइन्ट' राखिएका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८, ११:१४:००